मन्त्री सोडारी बर्खास्तीको कारण यस्तो पो रहेछ !
खेम बम काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दिर्घ सोडारीलाई बर्खास्त गरिएसँगै विभिन्न खाले बिषय सार्वजनिक हूँदै गएका छन् । मन्त्री सोडारीलाई ‘सस्पेन्स’ तवरले गरिएको बर्खास्तीमा सामाजिक सञ्जालमा समेत
दार्चुलाबासीको जुवा अड्डा धारचुलामा
लोकेन्द्र प्रसाद जोशी दार्चुला । दार्चुला जिल्लामा विगतदेखी नै जुवा खेल सञ्चालन हुने गरेको भएपनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन् । जुवा खेल्ने पेशामा लागेको मानिसहरु यस वर्ष शुरु देखि
मन्त्रीबाट बर्खास्त सोडारी नेकपाको साधारण सदस्यबाट किन हटाइए ?
खेम बम काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का तत्कालिन कैलाली जिल्ला अध्यक्ष एवम् सामाजिक विकासमन्त्री दिर्घ सोडारीलाई मन्त्रीसँगै पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी निष्काशित गरिएको छ । पदीय मर्यादा विपरित कार्य
विद्यालयमा ऋखंलावद्ध तोडफोड
लोकेन्द्र प्रसाद जोशी दार्चुला । मार्मा गाउँपालिकामा पछिल्लो समय ऋखंलावद्ध रुपमा विद्यालयहरुमा तोडफोड हुने गरेको छ । जात्राको मौका छोपी विद्यालय तोडफोड गरी ल्यापटप चोरी हुने गरेको छ । मार्मा
सुदूरपश्चिममा मन्त्रीकाे शपथ, प्रदेश ३ मा आपत्
सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलार्इ पद तथा गाेपनीयताकाे शपथ गराउँदै मुख्यमन्त्री त्रिलाेचन भट्ट, तस्बिर भीम चाैधरी तीर्थ न्याैपाने काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नवनियुक्त सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले शपथ लिनु
‘पार्टीले मन्त्रीबाट हटायो, सहज रुपमा लिएँ’
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आफ्नो बर्खास्तीलाई सहज रुपमा लिनु भएको छ । मन्त्री सोडारीले आफूलाई पार्टीको निर्णय अनुसार पदबाट हटाइएको प्रतिक्रिया दिँदै त्यसलाई स्वीकार गर्ने
सुवेदी मन्त्री नियुक्त, शपथको तयारी हुँदै
भिम चाैधरी कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीमा कृष्णराज सुवेदी नियुक्त हुनु भएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचल भट्टले दीर्घबहादुर सोडारी मन्त्रीबाट बर्खास्त गरे लगतै सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको हो ।
स्थापितपछि सोडारी मन्त्रीबाट बर्खास्त
काठमाडौं । प्रदेशका मन्त्रीहरु एकपछि अर्को गर्दै बर्खास्त हुन थादलेका छन् । सुदूरपश्ह्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी पदबाट बर्खास्त भएका छन् । मन्त्री सोडारीलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार पदबाट हटाउनु
दार्चुला । अज्ञात समूहले मार्मा गाउँपालिका–३ स्थित लटिनाथ उमाविमा तोडफोड गरेको छ । विद्यालयको कम्प्युटर कक्ष र प्रशासनको ताला काटेर तोडफोड गरिएको थियोे । सो घटना शुक्रबार भएको अनुमान गरिएको
निर्मला परिवारको अनिश्चित्कालीन धर्ना शुरू
काठमाडौं । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारालाई सार्वजनिक गर्न दवाव दिँदै आईतबारदेखि पीडित परिवारले अनिश्चित्कालीन धर्ना दिन शुरू गरेका छन । निर्मलाकी बुबा यज्ञराज, आमा दुर्गालगायत परिवारका